December 2021 – Daily News
ကရင်နီပြည်နယ်၊ ဖရူဆိုတွင် စစ်တပ်က စစ်ဘေးရှောင်ကလေးသူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ အပါအဝင် ပြည်သူ ၃၅ ဦးကို မီးရှို့သတ်ဖြတ်
December 25, 2021 Min Thuta 0
ကရင်နီပြည်နယ်၊ ဖရူဆိုတွင် စစ်တပ်က စစ်ဘေးရှောင်ကလေးသူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ အပါအဝင် ပြည်သူ ၃၅ ဦးကို မီးရှို့သတ်ဖြတ် ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ကရင်နီပြည်နယ်၊ ဖရူဆို၊ မိုဆိုဖက်တွင် ယမန်နေ့ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ စစ်ကောင်စီတပ်က ကလေးသူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ အပါအဝင် ပြည်သူ ၃၅ […]
အသက် (၉၀) အရွယ် တံမြက်စည်းရောင်းတဲ့ အဖွားအား နေထိုင်ဖို အဆင်ပြေစေရန် အိမ် (၆) လစာ ချုပ်ကာ ကူညီပေးဖြစ်ခဲ့ပုံတွေကို ပီတိဖြစ်စွာ ပြောပြလာတဲ့ မိုးစက်
အသက် (၉၀) အရွယ် တံမြက်စည်းရောင်းတဲ့ အဖွားအား နေထိုင်ဖို အဆင်ပြေစေရန် အိမ် (၆) လစာ ချုပ်ကာ ကူညီပေးဖြစ်ခဲ့ပုံတွေကို ပီတိဖြစ်စွာ ပြောပြလာတဲ့ မိုးစက် လူရွှင်တော်မိုးစက်ဟာ လတ်တလောမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ အနုပညာသမားတွေနဲ့ လက်လုပ်လက်စား ပြည်သူတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေ […]
ယောက္ခမဖြစ်သူ ခရိုနီသူဌေးကြီး ဦးခင်ရွှေရဲ့မွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနားသို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ တက်ရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့ကတော့ ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေရဲ့ (၇၁) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရက်မြတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဇေကမ္ဘာပြတိုက်မှာ ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်က ဇေသီဟရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ပို့စ်တစ်ခု တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ယောက္ခမဖြစ်သူ ခရိုနီသူဌေးကြီးဦးခင်ရွှေရဲ့မွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနားသို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ တက်ရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ” အဖေ့ရဲ့ ၇၁ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပြည့် အမှတ်တရသားသမီးတွေကို ၀မ်းနှင့်လွယ်မမွေးခဲ့ပေမယ့်သားသမီးဘ၀ လှပဖို့ကို ပခုံးနဲ့ သယ်ပေးခဲ့တဲ့ အဖေ………. သားသမီးတွေအပေါ် အသက်နဲ့ရင်းချစ်ခြင်းတွေရှိခဲ့သော်လဲသူ့ရဲ့ အချစ်ဖွင့်လှစ်ကာမပြ ဆုံးမ တတ်တဲ့ အဖေ…………သားသမီးတွေနဲ့ တူကာယှဉ်ပြုံး ပျော်ကာမဆုံးနေချင်သော်လဲ နံနက်မိုးသောက်အာရုဏ်ရောက်ချိန်မှစ နေ၀င်မိုးချုပ်ထိ တကုပ်ကုပ် အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရတဲ့ အဖေ………….. သားသမီးများအတွက် စိတ်စေတနာအရင်းခံနှင့် မုန်းလိုကမုန်း မျှတစွာ စီမံပေး တဲ့ အဖေ………နေရာစုံမှ ပစ်သည့်မြှားကို ရှေ့မှာစုံရပ် ကြံ့ကြံ့ခံပြီး သားသမီးရှေ့ရေး မညိုးနွမ်းအောင် ရင်ဆိုင်ပေးတဲ့ အဖေ…………….၇၉၆ ဆူသော စေတီဘုရား တို့၏ အလှူရှင် အဖေ….မွန်ပြည်နယ်ဦး ထူးသည့်စေတီ ကျိုက်က္ကလွန်ပွန်း စေတီတော်မြတ်ကို မှတ်မှတ်ရရ မွေးနေ့ရက်တွင် ထီးတော်တင်ကာ အလှူပေးသည့် ထူးခြားကုသိုလ် ပေးတဲ့ အဖေ….ဂေါတမမြတ်စွာ ပွင့်တော်မူပြီး ဆံတော်အရှင် ဌာပနာသည့် ဆံဦးဆံဖျား မြတ်မော်တင်စွန်းတွင် မွေးနေ့တိုက်ဆိုင် ထီးတော်တင်ပွဲ ကျင်းပပေးတဲ့ အဖေ….ဗုဒ္ဓ ရင်ငွေ့ ခိုလှုံခွင့်ရ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်ပွါး ရွှေဘုံသာဝယ် သံဃာ ရာဇာ ပေါင်းညီညာဖို့ ထီးတော်တင်ကာ ဆုတောင်းပေးတဲ့အဖေ…. တစ်ဘဝကိစ္စ ချမ်းသာတာထက် သံသရာတစ်လျှောက် အေးချမ်းစေဖို့ ဒါနအမွေ တူညီပေးကာ မေတ္တာပေးတဲ့အဖေ….အမျိုးဘာသာ ၊သာသနာကို တမူထူးခြားသားသမီးများ ချစ်တတ်လာအောင် စံပြ စံပြု သာသနာပြုတဲ့ တို့ရဲ့အဖေ………..ငါတို့ရဲ့အဖေအဖေ့ ကျေးဇူးအဖေ့ မေတ္တာအဖေ့ စေတနာ ………. အရာရာတိုင်း တုနှိုင်းလို့ပင်မှီမည်မဟုတ်သို့ပါသောကြောင့်အဖေသည်သာ ဘ၀ပါဟု အစဉ်အမြဲ ရင်ထဲမှာ အစဉ်ရိုကျိုး ရှိခိုးဆဲပါ……….” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ္ႀကီးေရ […]
December 21, 2021 Min Thuta 0
စင်ကာပူအစိုးရအနေနဲ့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုတယ်လို့ပြော ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၆ စင်ကာပူအစိုးရအနေနဲ့ SACရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို အာဆီယံကို တက်ရောက်ခွင့်ပြုပေမယ့် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုတယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဗီဗီအမ် ဘာလာဂစ်ရှ်နမ် (Vivian Balakishnan) က […]
ဖမ်းဆီးခံထားရသော သရုပ်ဆောင်ဦးဆင်မ ကွယ်လွန်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းများထွက်ပေါ်နေ
ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကစလို့အာဏာသိမ်းခဲ့တာဟာယနေ့ထက်ထိပါပဲ၊ တော်လှန်ရေးကြီးအတွင်းမှာလဲအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းများစွာရှိသလိုမတရားအဖ.မ်းဆီ.းခံရတဲ့ပြည်သူတွေလဲများစွာရှိနေပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့အတူအနုပညာရှင်များလဲအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်ဆင်မကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူတစ်သားတည်းပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှာတွေမှာအားတက်သရော ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကဖြင့်အမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့သြဂုတ်လ၂၄ရက်နေ့ညမှာဆိုရင်တော့သရုပ်ဆောင်ဆင်မကမတရားအဖ.မ်းဆီ.းခံခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်ဆင်မက အဖ.မ်းခံလိုက်ရပြီးကွ.ယ်လွ.န်သွားကြောင်းလဲသတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ သတင်းအမှ.ားသာဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်း၊ မတရ.ားအဖ.မ်းဆီ.းထားတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလဲဘေးကင်းကင်းနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်းဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ စာဖတ်သူအပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ ဘေးဘယာဝေကွာပြီး လိုရာပန်းတိုင်ကို အမြန်ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ခရက်ဒစ် ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖတ်ရန် ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကစလို့အာဏာသိမ်းခဲ့တာဟာယနေ့ထက်ထိပါပဲ၊ တော်လှန်ရေးကြီးအတွင်းမှာလဲအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းများစွာရှိသလိုမတရားအဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေလဲများစွာရှိနေပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့အတူအနုပညာရှင်များလဲအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်ဆင်မကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူတစ်သားတည်းပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှာတွေမှာအားတက်သရော ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကဖြင့်အမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့သြဂုတ်လ၂၄ရက်နေ့ညမှာဆိုရင်တော့သရုပ်ဆောင်ဆင်မကမတရားအဖမ်းဆီခံခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်ဆင်မက […]
သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးနှင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်ပါမည်ဟု MWD မှ ကြေငြာကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးတို့ဇနီးနောင်နှံကိုလူတိုင်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ၊သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာမြန်မာ့အနုပညာလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်သလို ပရိတ်သက်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုလည် အခိုင်အမာရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာအားသွန်ခွန်စိုက်ပါဝင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်၊ထိုကြောင့်၅၀၅ကဖြင့်အမူဖွင့်‌အရေးယူခံခဲ့ရပါတယ်၊ သူတို့နှစ်‌ဦးအဖမ်းခံရတာလည်း၄လ‌ကျော်ကြာခဲ့ပီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ MWD က သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးနှင့်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကိုကွင်းလုံးကျွတ်လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းMWDကကြေညာသွားပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်လို့နေပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကတော့ အတိအကျမသိရသေးပေမယ့် ဒီသတင်းသာအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင် ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးပျော်ရွှင်နေကြမှာတော့ အမှန်တကယ်ပါပဲ။ သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးနှင့်အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါစေလို့လည်း ပရိတ်သက်ကြီးနဲ့အတူ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ Credit ပရိတ်သတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးတို့ဇနီးနောင်နှံကိုလူတိုင်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ၊သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာမြန်မာ့အနုပညာလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်သလို ပရိတ်သက်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုလည် အခိုင်အမာရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ […]
အကောင်းဆုံးယတြာ ချေ ကြပါ
ကောင်း လွန်းလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပေးပါ။ဖတ်ပြီးလျှင်လည်း တပါးသူများကိုပြန်လည်ပို့ချပေးပါ။ ၁။ ဝင်ငွေ မကောင်းတဲ့အခါ ချွေတာ သုံးစွဲတာ အကောင်းဆုံးယတြာ။ ၂။ လမ်းသွားတဲ့အခါ ကြီးမားတဲ့ သတိဝီရိယထားခြင်းဟာ အန္တရာယ်ကင်းဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ။ ၃။ ရန်လိုနေတဲ့လူနဲ့ ဖက်ပြိုင်ပြီး မငြင်းတာ အကောင်းဆုံးယတြာ။၄။ ဒေါသထွက်စရာ ကြုံ […]
ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းဆုကို တစ်ခမ်းတစ်နားဖြင့် သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်လက်ခံရယူ
အောက်တိုဘာ (၁၉) ရက် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် International Republican Institute (IRI) က အဖွဲ့ကြီးမှ ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုထားသော Freedom Award (ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းဆု) အတွက် ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုချီးမြှင့်မည့်အခန်းအနားကို အမေရိကန်တွင်ကျင်းပမည်ဟု IRI အဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်။ ထိုဆုကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် IRI အဖွဲ့ကြီးမှ […]
၀င်ဖတ်ရင်းမျက်ရည်ပါကျရတဲ့ ဖခင် ဖြစ်သူ ဇင်ဝိုင်း အတွက် မင်းမော်ကွန်း ရေးလိုက်တဲ့ စာ
၀င်ဖတ််ရင်းမျက်ရည်ပါကျရတဲ့ ဖခင် ဖြစ်သူ ဇင်ဝိုင်း အတွက် မင်းမော်ကွန်း ရေးလိုက်တဲ့ စာ မင်္ဂလာပါ ချစ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မင်းမော်ကွန်းဟာ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံထားရ သော်လဲ တိုင်ပွဲဝင်အားကို မလျော့ပဲဆက်လက်တိုက်ပဲ ဝင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီလို တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကြားက ဖခင်ကြီး အတွက်လဲ စိတ်မအေး ဖြစ်နေရ […]